Madaxweyne Farmaajo ma dhisi doonaa mise wuu dumin doonaa Buundada Midnimada Soomaaliya ee inay dunto qarka u saaran? W/Q Mohamoud Ibrahim - Africa News Addict
Madaxweyne Farmaajo ma dhisi doonaa mise wuu dumin doonaa Buundada Midnimada Soomaaliya ee inay dunto qarka u saaran? W/Q Mohamoud Ibrahim
Eastern Africa 19-5-2017 raxanreeb.com 76
Madaxweyne Farmaajo ma dhisi doonaa mise wuu dumin doonaa Buundada Midnimada Soomaaliya ee inay dunto qarka u saaran?
Sool iyo Sanaag waa Buundada Midnimada!
Laga soo bilaabo sannadkii 2004 waxa nidaamka dawladnimada Soomaaliya lagu soo kordhiyey hab-maamulka loo yaqaaanno Federaalka (federalism). Habmaamulkaasi waxa lagu qoray dastuurka dalka (qabyo-qoraalkii hore, iyo dastuurka ku meelgaadhka ah). NIdaamkaasi dad badan oo Soomaaliyeed ayaa diidmo kala hor yimid iyagoo sababao kala geddisan cuskanaya. Ha yeeshee wixii ka danbeeyey...